Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo iOS Calendar app | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | Zvimwe Zvirongwa zveMac
Mazhinji maapplication ekuzvarwa atinowana muIOS, uye kudzamara mabetas ekuvandudza gumi akatadza kubviswa. Pakati pezvakakosha pane iyo gallery gallery, iyo Apple Music app uye iyo Karenda. Nhasi ndichataura nezve iyo Karenda, mashandiro ayo, kubatsira kwayo, hunhu hwayo uye kusangana kwayo neICloud uye nevatinosangana navo.
Dzidza maitiro ekuti uwane zvakanakisa kubva paKarenda app pane yako iPhone, iPad uye zvakare yako Mac, nekuda kwekuenderana kwakaringana kweApple ecosystem. Ita kuti zviitiko zvako zvese nemisi zvinyorwe uye usambokanganwa mazuva ekuzvarwa. Kutevera.
1 Zvakawanda kupfuura karenda yeIOS
2 Kubudirira muIOS uye maapple ayo ekuzvarwa
Zvakawanda kupfuura karenda yeIOS
Hatisi kutaura nezve nzvimbo yakapusa yekutarisa misi nemazuva. Tiri kutaura nezve kurongeka kwezviitiko zvako zvese, zvako zvekugadzwa uye zuva rako zuva nezuva, zvese mune ramangwana uye munguva yakapfuura. Wedzera zviitiko, seta chaiyo nguva uye ruzivo. Sanganisira shamwari dzako nenhengo dzemhuri mavari kuitira kuti pasave nemunhu anokanganwa uye munhu wese anopinda mhemberero nemapati. Set uye ubvunze mazororo enyika uye nezvimwe zvakawanda. Aya ndiwo mamwe emabasa aunogona kuita mune yechinyakare Calendar app uye izvo zvinouya zvinobatsira muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Wedzera zviitiko kubva kumisangano yako, mhemberero, mafaro. Maka zvese zvichaitika pakarenda yako, nzira yakanakisa yekusapotsa chero chinhu.
Mazuva ekuberekwa, mazororo uye zviitiko zveFacebook. Ruzivo rwunobva kune ako masocial network uye avo vaunobata vanowedzerwa otomatiki kuKarenda, ndiyo nzira yakanakisa yekumaka mazuva senge mazuva ekuberekwa uye usazomboakanganwa zvakare. "Iwe hauna kundikorokotedza, hauna hanya neni" chimwe chinhu chatisingade kunzwa, chidzivise nekuve nezvose munzvimbo imwechete uye nekubvumira zviziviso kukuzivisa kana riri zuva rakakosha.
Bvumirana zvese zvese pamidziyo yako. ICloud inoita kuti ive nyore kwazvo uye inonyatsogadzikana.
Wedzera shamwari dzako kuzviitiko uye hapana munhu anorasika.
Mazhinji maficha matsva ari kuuya neIOS 10 uye neyakagadziriswa. Tinogona kuwedzera zviitiko kubva kumeseji dzatinonyora kana zvinyorwa kubva kuemail atinotumirwa. Zviri kuva nyore uye kugadzikana. Pamusoro pekumisikidza nzvimbo uye nezvimwe.
Bvunza Siri. Udza iyo wizard yeIOS kuti igadzire chiitiko uye igadzirise pasina kubata skrini. Maoko-emahara, Hei Siri, pane iPhone 6s uye iPhone SE.
Kubudirira muIOS uye maapple ayo ekuzvarwa
Zvishoma nezvishoma, zvemo zvekushandisa zviri kuvandudza uye zviri kusvika padanho uko rechitatu-bato kunyorera risingagare richikurudzirwa kupokana navo. Vazhinji vanosarudza kushandisa mamwe maapplication kubata, semuenzaniso, manotsi kana zviyeuchidzo uye zvekuita-zvinyorwa, asi chokwadi ndechekuti maapplication emuno anoshanda chaizvo, anoshanda zvakakwana naSiri uye neICloud synchronization.
Wedzera chiitiko kana gadzirisa imwe kubva kune yako iPhone uye iwe unozongo gadzirisa iyo mu iPad Pro, iPod Touch, Mac, uye iCloud Web ine chero komputa. Aya ndiwo mashandiro eICloud, mune yakapusa, intuitive uye yakasununguka nzira. Ita zvakanakisa zvemaapplication uye kana mune chero basa raunofunga kuti rakaperevedza, enda kune mumwe wechitatu mapato. Iwo akanakisa epamutemo Apple ekugadzira mapurogiramu aunowana muIOS 10 ndeaya: Manotsi, Karenda, Zviyeuchidzo, Tsamba, Mapeji, Nhamba, Keynote, iCloud Drive, iMovie, uye GarageBand. Ivo vakasununguka kwemakore mashoma uye kurudziro yangu ndeyekuti iwe uyedze ivo nekukurumidza sezvinobvira kana wanga usati uchiishandisa.
Muzuva rangu zuva nezuva ini ndinoshandisa iyo karenda zvakanyanya kutara mazuva ekupedzisa emamwe mabasa ane chekuita nemapurojekiti angu. Iyi inzira yakanaka kwazvo yekuziva kubata masvondo nemwedzi, pamwe nekuziva zviitiko zvandinofanira kuenda uye nemazuva ekuzvarwa. Handizive zvatingaite pasina karenda pane edu nhare mbozha, zvinoita kunge zvakakosha kwandiri. Sezvo Apple zvishandiso zvinotidhura zvakanyanya Ngatitorei zvizere kubva mairi uye tinakirwe nezvakanakira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Pro » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo iOS Calendar app
Zvakanaka, ini ndinoona chakakosha chakakanganisika mune yechinyakare iOS Calendar application, iri kuti hapana mabharuni anoonekwa pane yekushandisa icon yekukuzivisa iwe nezve chiitiko. Ini ndinofunga kuti kana iwe ukakwanisa kuseta yekutanga uye yekupedzisira nguva dzechiitiko, chinhu chako ndechekuti panguva iyoyo yenguva bharuni rinoonekwa pane icon kuitira kuti irege kuenda isingazivikanwe ... ini handizvinzwisise, uye nekuda kweichi chikonzero ini handishandise iko kunyorera, zvinonyadzisa nekuti ini ndinonyatsoda iko application pachayo.
Carlos unogona kuisa chiziviso chezviitiko zvaunoda pakarenda. Iwe zvakare une sarudzo yekusarudza kana iwe uchida kugamuchira chiziviso mazuva maviri pamberi, rimwe zuva pamberi, awa rimwe pamberi nezvimwe ...
Ini ndanga ndichitsvaga maitiro ekugadzirisa khalendari yangu uye ipapo handina kuiwana ... zvinonyadzisa sei.
MacOS Sierra uye mashandiro eBeta anoshanda